तल्लो जातका राजेश नेपालीले तीन बर्ष सम्म प्रेम गरेर क्षेत्रीको छोरी भगाएर गरे धुमधामसंग विवाह – Gazabkonews
नपाली समाजको भित्रि वा बाहिरी मनोदशा हेर्ने हो भने अहिले पनि अन्तर्जातीय विवाहलाई सजिलै स्वीकारेको पाइँदैन । तर, पनि अन्तर्जातीय विवाह हुने गरेको पाइन्छ । कथितरुपमा तल्लो जात र उपल्लो जात भनि गरिएको वर्गीकरणले विवाहजस्तो कुरामा समेत केटाकेटीले सहजै निर्णय गर्न सक्दैनन् । तर, उदारवादी हुँदै गइरहेको पछिल्लो समयक्रमलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने यो जातजाती भन्ने प्रसंग र विभेदका कुरा पनि अब चर्चा गरिररहनु पर्ने विषय रहेन भन्ने कतिपयको मत छ ।
कानूनले अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्छ, कथितरुपमा कसैलाई तल्लो जात भनेर होच्याउने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता कार्यलाई बर्जित समेत गरेको छ । तर, ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि तल्लो जाती र माथिल्लो जाती भन्ने÷मान्नेहरु भेटिज्छन् र उनीहरुले अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकार्दैनन् र बर्जित गरिराख्नुपर्छ भन्ने मत राख्छन् । अन्तर्जातीय विवाह गरेका राजेश नेपाली र अन्जना कुँवरसँग हामीले उनीहरुले कसरी यो कदम चाले ? कथित रुपमा तल्लो उपल्लो जात भन्ने समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कसरी सम्भव भयो ? उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध कसरी स्थापित भयो ? उनीहरुले कसरी विवाह गरे ? लगायतका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । कुराकानी रोचक छ, पूरा हेर्नुहोला ।
यही सामाजिक उल्झनका बीच पनि आँटेर अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडी भेटेपछि हामीले उनीहरुको अनुभव सुनेका छौं ।अन्तर्जातीय विवाह गरेका राजेश नेपाली र अन्जना कुँवरसँग हामीले उनीहरुले कसरी यो कदम चाले ? कथित रुपमा तल्लो उपल्लो जात भन्ने समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कसरी सम्भव भयो ? उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध कसरी स्थापित भयो ? उनीहरुले कसरी विवाह गरे ? लगायतका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । कुराकानी रोचक छ, पूरा हेर्नुहोला ।
यि हुन् अमिताभ बच्चनकी क्युटि नातिनी नव्या, जसले शुरु गरिन यस्तो व्यवसाय, बधाइ दिनेको ओइरो काठमाडौ – बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनकी नातिनी नव्या नबेली नन्दाले एक व्यवसाय शुरु गरेकी छन् । उनले महिला स्वास्थसँग सम्बन्धित स्टार्ट अप सुरु गरेकी हुन् । आफुले यो व्यवसाय गरेको सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराएकी हुन् । उनले गरेको व्यवसाय प्रति सबै जनाले बधाई र धन्यबाद दिएका छन् । उनले शुरु गरेको स्टार्टअपको नाम आरा ह्याल्थ राखीएको भारतिय मिडियाले जनाएको छ । नव्याको यो नयाँ सुरुवतलाई उनका मामा अभिषेक बच्चन, आमा श्वेता बच्चन र कथित प्रेमी मिजान जाफरीले बधाई दिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्:मेलम्ची परीक्षण स् सुन्दरीजलस्थित सुरुङको भित्री ढोका बन्द : गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलस्थित महाँकालको मेलम्ची खानेपानीको परीक्षणका क्रममा सुरुङभित्रको ढोका बन्द गरिएको छ ।यही फागुन १० गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानबाट २६।५ किमी लामो सुरुङमा परीक्षणका लागि पानी हालिएको थियो । सुन्दरीजल सो सुरुङको अन्तिम बिन्दु हो । मुहानबाट पानी हालेपछि अन्तिम बिन्दुको सुरुङभित्रको ढोका बन्द गरी आउन सक्ने समस्या बारेमा सजगता अपनाइएको आयोजनाका साइड इञ्जिनीयर ब्रह्मलाल राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सुरुङमा हालिएको पानी लिकेज भएर क्षति हुन सक्ने भएकाले ढोका बन्द गर्ने र अन्य तयारी भइरहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाको तिम्बुमा पर्ने सो आयोजनाको मुहानबाट छोडिएको पानी सुन्दरीजल आइपुग्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । हाल परीक्षणका लागि २६० लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी सुरुङमा हालिएको छ । पानी हालेको चार दिन बित्दा तीन किमी सुरुङ पार भएको जनाइएको छ । परीक्षण सकिएपछि प्रतिदिन १७ करोड लिटर पानी सुरुङमार्गबाट सुन्दरीजल आइपुग्ने छ । पानी आएपछि यहाँ निर्माण भएका साढे आठ करोड लिटरका दुई वटा प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी वितरणका लागि पठाउने तयारी छ । दुवै केन्द्रको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । ती केन्द्रमा वाग्मतीको पानी हालेर सामान्य परीक्षणसमेत गरिएको छ ।